गण्डकीमा मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आउने | BeniOnline.com.np जिल्लाका ताजा अनलाइन समाचार
घर समाचार राष्ट्रिय समाचार गण्डकीमा मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आउने
गण्डकीमा मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आउने
५ पुष २०७७, आईतवार २२:४१
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आइतबार बिहान संसद विघटन गरेपछि त्यसको प्रभाव प्रदेशहरूमा पनि देखिएको छ । भलै, राष्ट्रपतिले विघटन गरेको प्रतिनिधिसभा हो, प्रदेशसभा भनेको स्वायत्त सरकार हुन् ।
तर, यहाँ पनि केन्द्रमा जस्तै ओली पक्ष र प्रचण्ड-नेपाल पक्षको समीकरणसहित नेकपाको दुईतिहाइको सरकार छ । त्यसकारण यहाँ पनि समीकरणको गणना सुरु भइसकेको छ । नेकपाकै सांसद समीकरणको खेल हुनेमा विश्वस्त छन् ।तर, यही हिउँदे अधिवेशनले यहाँ पनि सत्ता समीकरण बदल्ने संकेत देखाएको छ । जसको संकेत नेकपा र कांग्रेसकै सांसदबाट आएको छ ।
सुरुमा यहाँको अहिलेको सत्ता अवस्था हेर्ने हो भने सभामुख पूर्वमाओवादी केन्द्रबाट छन्, मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ पूर्वएमालेबाट । पूर्वएमालेमा पनि गुरुङ कट्टर ओलीपक्षीय नेता तथा स्थायी कमिटी सदस्य पनि हुन् । नेकपाको विवाद मिलाउन सक्रिय गुरुङको नेतृत्वमा अहिले गण्डकीमा दुईतिहाइको सरकार छ ।
ओली पक्षमा कित्ता क्लियर गरेका गुरुङसहित गण्डकीमा कति सांसद छन् त ? नेकपाका एक नेताका अनुसार सरसर्ती हिसाबमा पूर्वएमालेको तर्फबाट निर्वाचित २८ मध्ये २७ सांसद ओलीलाइनका हुन् । माधवकुमार नेपाल पक्षका एकमात्र सांसद इन्द्रलाल सापकोटा हुन् । सापकोटाले प्रतिनिधिसभा विघटनप्रति आफ्नो विमति जनाउँदै माधव नेपाल लाइनमै रहेको क्लियर गरेका छन् ।
पूर्वमाओवादी केन्द्रका भने १२ सांसद हुन् । नेकपा संसदीय दलका उपनेता रामजी बराल जीवनका अनुसार पूर्वमाओवादी केन्द्र एकढिक्का छ । पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादीको समीकरण भत्किना साथ सामान्य रुपमा ओलीपक्षमा २७ सांसद हुन्छन् भने प्रचण्ड-माधव पक्षमा चाहिँ १३ जना । ६० जना प्रदेशसभा सदस्य भएको गण्डकीमा सामान्य बहुमतको सरकार बनाउन ३१ जना चाहिन्छ । त्यसका लागि तीनवटा प्रतिपक्षी पार्टीसँगको सहकार्य पनि अनिवार्य छ ।
नेकपा सांसद भन्छन्- सरकार बनाउन कांग्रेस अनिवार्य
पूर्वएमालेभित्र ओलीपक्षका २७ सांसद भए पनि त्यसले बहुमत जुटाउन सक्छ त ? यसमा राष्ट्रिय जनमोर्चाका तीन र जनता समाजवादी पार्टीका दुई सांसद आए भने गण्डकीमा फेरि पनि ओलीपक्षको सरकार रहिरहन सक्छ । तर, मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत पाउन उनले यी दुई साना दललाई फकाउन सक्नुपर्छ । तर, ओली पक्षकै केही नेता पछिल्लो समय तटस्थ छन् । यसको अर्थ, उनीहरू ओली समूहबाट निस्किने दाबी नेकपाकै सांसदको छ ।
यता, प्रचण्ड-नेपाल पक्षका सातजना मन्त्रीले सामूहिक राजीनामा दिँदा माओवादीका लेखराज भट्ट र गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले भने राजीनामा दिएनन् । यसले पूर्वमाओवादीमा के असर गर्छ त ? संसदीय दलका उपनेता बराल भन्छन्, “हामी १२ जना एकजुट छौँ, र रहन्छौँ ।” तर, माओवादीकै केही सांसद यताउता हुन सक्ने आशंका भने नेकपाकै नेताहरूमा छ ।“३/४ जना यताउता हुन सक्छन्, हाम्रो (माओवादी) पनि जान सक्छन्, उताका (ओली) पनि आउन सक्छन्,” एक सांसदले भने ।
यदि ओली पक्षका भनिएका सांसद नै एकजुट भएनन् र साना दल सत्ता साझेदारी गर्न तयार भए भने पनि ओली पक्षले बहुमत ल्याउने स्थिति नआउन सक्छ । यता, प्रचण्ड-माधव नेपाल पक्ष भनिएका १३ सांसदहरूले सरकार बनाउनचाहिँ साना दलबाहेक पनि कांग्रेससँग सहकार्य गर्नुको विकल्प छैन । Source: baahrakhari.com